HsuHost.com - Myanmar Hosting Provider - Domain Registering & Web Hosting
“ဆု” ဝဘ်ဆိုဒ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
Free with Every Domain, Free eMail, DNS, Theft Protection and More.
Linux Share, Reseller, Website Builder and more. Comes with cPanel, PHP, Apache and more
We offer Enterprise and Business simple and powerful Webmail. Also Google Suite
Powerful encryption for your data, Get SiteLock and secure your website from hackers, viruses and malware
အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ဆောင်မှု (၄)မျိုးကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး Facebook ကြော်ငြာများနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ဆောက်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်တွင် လူကြီးမင်းများ အသုံးပြုလိုသော Website လိပ်စာအမည်အား မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Web Hosting အမျိုးအစားများနှင့်အတူ မှတ်ပုံတင်၍ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး Domain သီးသန့်လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ။ www.yourname.com အား ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး name@yourname.com ဖြင့် အီးမေးလ် ၂ ခု လည်း အခမဲ့ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင် Website များ လွှင့်တင်ရန်အတွက် ထားရှိမည့်နေရာအား ဝယ်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Hosting တွင် ဈေးနှုန်းများအလိုက် ရွေးချယ်၍ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဈေနှုန်းပေါ်မူတည်၍ လူကြီးမင်းများ၏ Website အား အင်တာနက်မှ ကြည့်ရှုရာတွင် မြန်ဆန်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အီးမေးလ်မှာ လူကြီးမင်းများ Domain ဝယ်ယူရာတွင် လည်းကောင်း၊ Hosting များ ဝယ်ယူရာတွင် လည်းကောင်း အီးမေးလ်များ ရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော်များမှ ပိုမိုကောင်းမွန်၍ လုံခြံမှုရှိသော eMail များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီး Google Mail တွင် လူကြီးမင်းများ၏ Website လိပ်စာအမည်ဖြင့် (you@yourname.com) အီးမေးလ်အဖြစ် သုံးစွဲနိုင်ရန်လည်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုကြီးထွားမြန်ဆန်စေရန်အတွက် ကိုယ်ပိုင် Website နှင့် စီပွားရေးကုမ္ပဏီ Website များပြုလုပ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုအား ကျွန်တော်များမှ ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဈေးနှုန်း USD 200 ဝန်းကျင်မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းများ၏ စိတ်တိုင်းကျ Website ဒီဇိုင်းဖြစ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ Hosting စာရင်းမှ လူကြီးမင်းများ၏ ကိုယ်ပိုင် (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သင့်လျော်မည့် အမျိုးအစားများအား ရွေးချယ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Domain တိုင်းအတွက် အခမဲ့
No.3, Karlontan Street,
North LanMadaw Quarter,
(95)9256745617
© 2017 - 2018 HsuHost.com. All Right Reserved.